Sanaag: Gobolkii Khayraadka Iyo Quruxda Ee Jamhuuriyadda Somaliland - #1Araweelo News Network
Sanaag: Gobolkii Khayraadka Iyo Quruxda Ee Jamhuuriyadda Somaliland
#Sanaag: Gobolkii Khayraadka Iyo Quruxda Ee Jamhuuriyadda #Somaliland
Sanaag: The Cradle of Somaliland People and the Region of The Tombs of their Ancestral Forefathers
Dal kasta waxa uu leeyahay gobol laf-Dhabar u ah taariikhda sooyaalkiisa, khayraadka dhulkiisa, quruxdiisa, wanaagga cimiladiisa, iyo degsiimadiisa. Gobolka Sanaag waa gobol ku sifooba arrimahaas oo dhan iyo kuwa kaleba. Degmooyinka Gobolka Sanaag waxay kala yihiin Ceerigaabo, Gar’adag, Laas-qoray, Ceel-Afweyn, Dhahar iyo Badhan. Gobolka Sanaag waxaa uu gobollada kale ee dalka Somalilnad kaga duwanyahay arrimaha soo socda:-
Buurraha Surad iyo Daallo
Waddooyinku waxay fududeeyaan is-dhexgalka iyo isku-socodka bulshada. Jidka Ceerigaabo waxa uu ka qaadanayaa qaybweyn fududaynta iyo sahlidda is-dhexgalka iyo isku-socodka bulshada Somaliland.
Waddooyinku waxay fududeeyaan maalgashiga iyo ganacsiga dal. Jidka Ceerigaabo waxa uu maalqabeenada Somaliland u fududaynayaa inay si weyn u maalgashadaan Gobolka Sanaag siiba xagga ganacsiga, beeraha, kallumaysiga, dal-xiiska iwm, arrimahaas oo Gobolka Sanaag aad qani ugu yahay.
Waddooyinku waxay qaybweyn ka qaataan dhaqdhaqaaqa dadka iyo dalagyada, waxayna dadka ka saaraan go’doonka iyo saboolnimada maadaama ay ku dhiirigelinayso in wax-soosaarka dal la gaadhsiinkaro meelkasta oo la doono. Jidka Ceerigaabo waxaa uu dadka ku nool Gobolka Sanaag ku dhiirigelinayaa inay labalaabaan wax-sooraka beeraha iyo dhaqashada xoolaha oo gobolku qani ku yahay maadaadama ay xoolahooda iyo dalagyadooda si fudud u gaadhsiinkarayaan dalka intiisa kale taas oo keenaysa in dad badan oo gobolka ka tirsan ka baxaan saboolnimada.
Waddooyinkku waxay fududeeyaan in horumarka dhaqaalaha dal uu uu wada gaadho dalka. Jidka Ceerigabo waxa uu gobolka Sanaag u fududaynayaa inay ka qaybgalaan horumarka dhaqaalaha dalka iyo daryeelka iyo horumarinta bulshada gobolkaas oo ay qaybweyn ka helaan Mashaariicda Horumarinta, daryeelka caafimaadka, horumarinta waxbarashada, sancada casriga ah iwm.
Waddooyinka waxay qayb libaax ka qaataan difaaca dal si marka dhibaato dagaal la soo gudboonaato deg deg loogu gurmado loona difaaco gobolka. Jidka Ceerigaabo waxaa aad u sahlayaa in gobolkaas dedeg loogu gurmado hadii cadowaga Somaliland u soo hanqal-taago ama soo weeraro si uu u waxyeeleeyo ama u kala dhantaalo qaranimada iyo dhulka Jamhuuriyadda Somaliland. Baaxadda iyo qiimaha gobolka Sanaag awgeed waxaa lama huraan ah in laga sameeyo saldhigyo ciidan oo difaac ah.